ClipIt: yakanakisa Android -style clipboard maneja weLinux | Linux Vakapindwa muropa
clipit es chishandiso chisina kuiswa nekutadza muUbuntu (kana imwe distro) asi izvo zvinogona kuita kuti hupenyu hwako huve nyore kwazvo kana uchigadzirisa clipboard yeLinux distro. Iyo maneja yakafanana neiyo yeAroid, iyo inokutendera iwe kuve nezvinhu zvakati wandei zvakatemwa pane clipboard kuti ugone kuzvinamatira chero nguva. Chinhu chisingagone kuitwa mumasisitimu anoshanda, nekuti kana uchiteedzera chinhu chimwe chinonyorwa pamusoro peiyo yapfuura ...
Asi zvekuparadzirwa kweLinux kune akati wandei eaya clipboard mamaneja izvo zvinokutendera iwe kuve nemacheka akati wandei kuti ugone kuzviisa kwaunoda uye kana iwe uchida. Imwe yeakareruka uye akapusa pane ClipIt, sezvatataura. Yakagadzirwa muC uye Gtk +, yakavakirwa paParcel satellite, imwe yeakanakisa pasina kupokana uye kuti kukura kwayo kwakasiiwa.
Clipit haisi chete chirongwa chemahara icho chakaenderera mberi nekuvandudza kweanononoka Parc satellite, asi vagadziri vayo vakakwanisa kugadzirisa mamwe mashandiro ayo, senge kuiswa kweChiratidzo kuti igare ichive nacho. Uye kuti umise unogona kuzvitsvaga muUbuntu Software Center, dhonza iyo terminal ("sudo apt-tora kuisa clipit") kana kurodha kodhi yekodhi kuti uiunganidze mune chero imwe distro kubva Sourceforge.net kana GitHub (kutsiva xyz yeshanduro yatakatora pasi):
[̣ / sourcecode]
Zvino tinogona ipfeke pamachar wotanga kunakidzwa nayol nemamwe mapfupi ekhibhodi, senge Ctrl + Alt + H (kuratidza rondedzero yezvinhu zvekupedzisira zvakakopwa) kana kana iwe uchida kuvhura kubva ku (Chiratidziro) icon mune yemenu bar. Uye inogadziriswa kwazvo, semuenzaniso kana tichienda kuChiratidziro menyu inoratidzwa matinogona kusarudza Zvaunoda, uko pakati pezvimwe zvinhu, tinogona kugadzirisa mapfupi ekhibhodi mune inoenderana tebhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Clipit: gadzirisa clipboard zviri nyore pane yako Linux kugovera
Zvakanaka, ikozvino unofanirwa kuyedza Klipper, iyo KDE clipboard maneja: haingoite chete izvo zvaunotaura nezve Clipit pano, zvakare inobvumidza zvinhu sekugadzirisa clipboard yezvinhu kana kugadzirisa "zviito" pane izvo zvaunoteedzera, zvinoenderana neicho wakateedzera. Ehezve, hapana zano rekuti rinoshanda sei pane mamwe ma desktops.
Blueberry, iyo nyowani Linux Mint Bluetooth yekumisikidza chishandiso